पछिल्लो समय झाँक्रीलाई मनोचिकित्सासँग जोडेर हेर्ने अवधारणा पनि पाइन्छ । नेपाली लोकबाजा संग्रहालय र सांस्कृतिक संस्थानले बुधबारदेखि राष्ट्रिय नाचघरमा सुरु गरेको सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय लोक संगीत फिल्म फेस्टिभलको पहिलो दिन झाँक्रीलाई लोकसंगीतसँग जोडेर चर्चा गरियो ।
नायीका श्वेता खड्काले भनिन्- 'तालको छाल हेरिरहँदा दिन बितेको पत्तै पाउँदिनँ । त्यसैले प्राकृतिक हिसाबले सुन्दर ठाउँ पोखरा नै लाग्छ । कति पटक पुगें भन्ने गन्ती नै छैन ।' उनलाई थप के के मन पर्छ त?
यतिबेला माहोल निर्वाचनमय छ । रंगकर्मीहरू पनि सचेतना नाटक लिएर देश दौडाहामा निस्केका छन् । सांस्कृतिक संस्थानले निर्वाचन आयोगसँग मिलेर देशभर निर्वाचन सचेतनासम्बन्धी सडक नाटक ‘महादान’ मञ्चन गरिरहेको जनाएको छ ।
मिलन चाम्सको निर्देशन रहेको ‘लिलिबिली’ को यति बेला लन्डनमा सुटिङ धमाधम चलिरहेको छ । स्कटल्यान्ड र लन्डनमा सुटिङ चलिरहँदा फिल्मका निर्माता गोविन्द शाहीले केही फोटो मिडियालाई उपलब्ध गराएका हुन् ।
केही दिनअघि घोषणा भएको फिल्म क्रिटिक्स अवार्डका विजेतालाई बुधबार मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरियो । चलचित्र समीक्षक समाज (फिक्सन) ले पछिल्ला तीन वर्षको अवार्ड एकैचोटि दिएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय लोक संगीत फिल्म महोत्सवमा एलपी देवकोटाको कर्णाली मष्टो छनौट भएको छ । राजधानीमा मंसिर ६ गते देखि ९ गते सम्म संचालन हुने महोत्सवमा कर्णालीबाट वनेको पहिलो लोक संगीत फिल्म छनौटमा परेको हो ।
‘मिस लिम्बू–२०१७’ को ताज अविशा फुदोङ लिम्बूले पहिरिएकी छन् । १३ जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै सोमबार साँझ अविशा पाँचौं मिस लिम्बू बन्न सफल भएकी हुन् । अविशाले ताजसँगै एक लाख पाएकी छन् । उनलाई गत वर्षकी मिस लिम्बू सानु नेम्बाङले ताज पहिराएदिइन् ।
देशको प्रतिनिधित्व गर्दै पहिलोपटक मिस युनिभर्सको प्रतिस्पर्धामा भिडिरहेकी नगमा श्रेष्ठले आफूलाई भोट गर्न देशवासीलाई आग्रह गरेकी छन् । यति बेला प्रतिस्पर्धाका विभिन्न राउन्डको तयारीमा रहेकी नगमाले लास भेगासबाटै विज्ञप्ति जारी गर्दै भोटको अपिल गरेकी हुन् ।
‘बुद्ध नेपालमा जन्मिएको’ भन्दै मुलुक भित्र र बाहिर थुप्रै अभियान भएका छन् । ‘बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल’ शीर्षकमा फिल्मसमेत बनिसकेको छ । मुलुकका थुप्रै समुदाय बौद्धमार्गी छन्, उनीहरू बौद्ध दर्शनमा आस्था पनि राख्छन् । तर, बुद्धले ज्ञान पारमिताको रूपमा खासमा के भनेका थिए ?
बीस फिल्ममध्ये थाइल्यान्डको ‘डेथ अफ अ साउन्ड म्यान’ ले यसपालिको ‘एकादेशमा इन्टरनेसनल सर्ट फिल्म फेस्टिभल’ मा बेस्ट फिल्मको ट्रफी जित्यो ।
हालै सम्पन्न ‘एसिया आर्टिस्ट अवार्ड’ मा कोरियन–चाइनिज ब्यान्ड ‘एक्सो’ ले संगीत विधामा अवार्ड जित्यो । उसले फयाबुलस र मोस्ट पपुलर अवार्ड पनि आफ्नो पोल्टामा पार्‍यो । ब्यान्डकै सदस्य डीओले मोस्ट पपुलर एक्टरको ट्रफी ग्रहण गरे । एसियन म्युजिकमा सबैभन्दा बढी ग्रान्ड अवार्ड (देसङ) विजेताका रूपमा एक्सोको नाम गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा दर्ता भएको छ ।
रणवीर सिंह र दीपिका पादुकोण अभिनीत बहुप्रतीक्षित ‘पद्मावती’ साबिक मिति डिसेम्बर १ मा रिलिज नहुने भएको छ । सञ्जयलीला भन्साली निर्देशित उक्त फिल्म सुटिङदेखि नै विवादमा मुछिएको थियो ।